China imboni yesikhwama esinamandla e-colorman eqinile kanye nabaphakeli | Feiqing
Isaka esikhwameni se-strongman esimibalabala
IStrongman sandbag iyisanda lesanda elisanda kuklanywa futhi lithandwa kakhulu ekuqeqeshweni kokuzivocavoca.
Ungayisebenzisela ukuthwala, wenze uqeqesho lomsebenzi osindayo, esikhundleni sebhola noma itshe elisindayo.Lesi sandbag esinamandla siyaphatheka, ungenza uqeqesho kunoma iyiphi indawo, njengasekhaya, ngasolwandle, epaki, epulazini njalonjalo. Ungagcwalisa isihlabathi, uqhekeze itshe, okusanhlamvu .... ukulungisa isisindo.
Isaka ngalinye lesikhwama esiqinile elinolwelwesi, elenziwe ngenayiloni eyi-100%, i-1050D Cordura, i-YKK ZIPPER, intambo eqinile enokuthungwa okungu-3. Isikhwama sokugcwalisa esine-velcro ephindwe kabili ukugwema ukuwa kwesihlabathi lapho uqeqeshwa. Sithunga nesibambo esincane lapho kuvulwa khona, ungavula umsele ngokushesha futhi kalula. Uziphu we-YKK ekuvulekeni kwegobolondo ukwenza isakagi liqine futhi alikwazi ukuphuka lapho usebenzisa, lenza iwaranti yomuntu onamandla i-sandman ibe yinde kunezikhwama zesihlabathi ezijwayelekile.
Iwaranti yeStrongman sandbag: Yiziphi izinto ozozigcwalisa esikhwameni? Uzoziqeqeshela kuphi nesikhwama? Ukwenza kanjani ukuqeqeshwa ngesikhwama? Bazosebenza iwaranti yomuntu onamandla. Siphakamisa ukuthi abaqeqeshi baqeqeshelwe phansi enjoloba, phansi ngesihlabathi esithambile ...., kungenza iwaranti ibe yinde. Izinto ezinamandla zesaka leStrongman ziyindwangu, kungcono ukukhetha isihlabathi esithambile futhi esigobhozayo noma isihlabathi sensimbi ukugcwalisa. uma ukugcwalisa izinto ezinzima, njengetshe eliqinile, ibhola lensimbi ... i-strongman sandbag izogqokwa phansi.
Njengoba isetshenziswe emincintiswaneni ebukhoma ye-USS / Official Strongman Games / Ultimate Strongman / Giants.
Isikhwama se-5.Filler esinokuvula ifaneli
Umkhumbi we-6.Will awunalutho ngaphandle kokugcwaliswa.
7.Custom logo ye-1pc qty.
8.Printing logo, efekethisiwe logo iyatholakala
Langaphambilini I-kettlebell yesihlabathi
Olandelayo: Isikhwama sokuphonsa uStrongman
ISiphepho iStrongman Sandbags
imfanelo rig umlenze
Isikhwama se-cyclone Strongman
ejimini isihlibhi 1